Dalka Japan qiimaha uu ka leeyahay Kalluunka iyo sida Soomaalida u dayacday – Bandhiga
Dalka Japan qiimaha uu ka leeyahay Kalluunka iyo sida Soomaalida u dayacday
Suuqa magaalada Tokyo ee dalka Jaban oo kamid ah suuqyada ugu waa weyn ee dalkaasi ayaa dalxiisayaasha ku wargeliyay in uu qabanayo todobaadka soo socda bandhigiisii ugu dambeeyay.
Boqolaal kaluumeysato ah ayaa isku dayaya iney tagaan Tsukiji si ay ugu soo iibsadaan suuqa malayga $5 billion.
Malayga ugu qaalisan waa 162-Kg gaar ahaan nuuca loo yaqaano Tuna waxaana lagu iibin doonaa 4.3 million yen oo u dhiganta ($A54,000) marka ugu horeysa ee suuqa la furo, sida ay sheegtay wakaalada wararka ee Kyodo.
Dadka reer Japan ayaa siyabo kala duwan kaga hadlay suuqan malayga waxaana ay sheegeen in muhiimad gaar ah u leeyahay.
Soomaaliya waxaa ku teedsan Badweynta Hinidya kaliya xeebaha dalka waxaa laga helaa boqolaal nuuc oo kalluun ah, mana looga faa’ideysto sidii la rabay.
Kaluumeysatada Soomaaliyeed ma heestaan qalab casri ah, shacabka Soomaaliyeedna ma yaqaanaan isticmaalka ama cunista Kalluunka.
Kheyraadka Soomaaliya waxaa kamid ah kalluunka oo loo dhoofin jiray dalal dhaca Yurub sidoo kale waxaa hadda jirta in maraakiib caalami ah ay xadaan Malayga ku jira Biyaha Soomaalida, cid waardiyeysa majirto, dowladda Soomaaliya ayaana laga rabay iney ciidan gaar ah u sameyso.
Marka la eego isticmaalka Kalluunka ee dalka kaliya wuxuu ku badan yahay deegaanada u dhaw dhaw xeebaha, waa in shacabka ay ka faa’ideystaan cunista Malayga oo qofka Bini’adamka u fiican caafimaad ahaan.